I-Semalt ifaka iiNqanaba eziThathu ezilula ukukhusela i-Malware Pop-Ups ne-Spam
Ukuba ukhangela i-intanethi imihla ngemihla, kufuneka uqhelane neentengiso ezipapa, i-malware kunye nogaxekile. Ezi zipapasho ezingaqhelekanga ziza kwiifom ezahlukeneyo kwaye zizama ukukuthengisa iimveliso okanye iinkonzo ezithile. Ngoxa ii-imeyile kunye nokuphuma kweefayile kunye neefemu ezihloniphekileyo zichanekile kwaye zikhuselekile, iinkqubo ze-adware ezivelisa i-malware engafunekiyo kunye ne-pop-ups ziya kufaka i-spyware kwaye zixake i-browser yakho yewebhu. Baza kubamba ulwazi lwakho oluzimeleyo, njengeenkcukacha zekhadi lesikweletu kunye ne-ID ye-PayPal.
U-Oliver King, i-12 (Semalt Umphathi weMpumelelo weMthengi, uthi i-imeyili engekho nto okanye i-spam yifom ye-ads - en iyi dedicated sunucu. Ukuba ibhokisi lakho lebhokisi lemiyalezo linemiyalezo emininzi evela kwiinkampani okanye abantu ongazi, unokuba ne-malware kwikhompyutha yakho. Umyalezo osheshayo kunye ne-imeyile sele yindlela eyaziwayo yokusabalalisa i-malware kunye ne-spyware. Abakwa-spammers bakhohlise kwimisebenzi enobungozi kwaye bathumela amaninzi angama-imeyili angenanto kwaye angenalusizo phantse nsuku zonke. Izabelo zeGoogle ezithunyelwa ngee-imeyli ze-spam ze-imeyli zonke iintsuku, kodwa kunokwenzeka ukulahla i-malware pop-ups kunye nogaxekile kumanyathelo amathathu alula.
Inyathelo 1: Susa iinkqubo ezingafunekiyo kwi-Google Chrome isiphequluli (Windows kuphela) :
Ukuba usebenzisa idivayisi ye-Linux okanye ye-Mac, awuyi kuzuza kule nqanaba..Kwaye ukuba usebenzisa iGoogle Chrome njengeziphequluli zakho eziphambili, unokususa kalula okanye uthintele i-malware pop-ups kunye nogaxekile ngeendlela ezilandelayo:
Fakela iplagi njenge-Adblock Plus kwaye ususe zonke iinkqubo ezingafuneki ngokuchofoza kwi-Remove option. I-Google Chrome izokukunceda ukuba ususe i-malware, usethe izicwangciso ukuba zilungele kwaye zicime izandiso zakho.
Ungalibali ukuqala kwakhona ikhompyutha yakho emva kokuba ufakile kwaye usebenze le plugin.
Ukuvula izandiso ozithembayo, iya kwiZiko ezingakumbi - Ukhetho lwe-Extensions kwaye nqakraza kwiQinisekisi elikhubazayo.
Isinyathelo 2: Susa iinkqubo ezingafunekiyo kuzo zonke iikhomputha:
Ukuba usanda kuthenga okanye ukukhuphela i-antivirus okanye inkqubo yokulwa ne-malware, kufuneka ugijime ukuze ususe i-ads-pop-up kunye nogaxekile ngokukhawuleza.
Kwikhompyutheni ye-Mac, iya kwikhowudi yeFolda uze uklikhe iqhosha kwi-Applications iqhosha.
Khangela iintengiso ze-pop-up okanye ugaxekile awukwazi okanye ufuna ukususa.
Cofa kwiComputer kwi-Trash iqhosha kwaye nqakraza kwi-Out of Trash ukuze ulawule i-malware kwangoko.
Inyathelo 3: Hlaziya kwakhona isetyuli kuzo zonke iikhomputha:
Unokusetha kwakhona izicwangciso zesiphequluli kunoma iyiphi ikhomputha ngendlela elandelayo:
Vula isiphequluli se-Firefox okanye i-Chrome kukhompyutha yakho.
Cofa kwiNketho yeZimiselo uze uye kwindawo ephezulu.
Isinyathelo esilandelayo kukuchofoza kwiqhosha lokuHlaziya kwakhona kwaye uqinisekise izenzo zakho ngokuchofoza inkinobho yokugcina.
Imiyalezo ene-malware okanye i-spyware ingafika kuyo nayiphi na imithombo, ngoko unokuzilungelelanisa iindlela ezi ngasentla ukuzisusa zonke. Ingaba ufumana ii-imeyile ezinokukrokra okanye ubone ama-pop-ups, eyokwazi ukuwagxotha kwaye ujabulele ukukhangela i-intanethi ngokukhuselekileyo nangokukhuselekileyo. Okwangoku, akufanele uvula ii-imeyile kunye nemiyalezo yombhalo wabathumeli abangaziwa!